Madaxweynaha Puntland oo kulamo Nairobi kula yeeshay safiiro shisheeye - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandMadaxweynaha Puntland oo kulamo Nairobi kula yeeshay safiiro shisheeye
January 25, 2020 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Madaxweyne Deni iyo iyo Aline Kuster-menager oo ah safiirka Faransiiska u qaabilsan Kenya iyo Soomaaliya. [Isha Sawirka: Puntland State House]
Nairobi-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa safar ku jooga magaalada Nairobi ee dalka Kenya halkaas oo uu gaaray asbuucii lasoo dhaafay.
Intii uu ku guda jiray safarkiisa, Madaxweynaha ayaa kulamo la qaatay safiirada shisheeye ee qaabilsan Soomaaliya oo ay kamidyihiin Mareykanka, UK, France, Sweden, iyo sidoo kale wakiilka IGAD u qaabilsan Soomaaliya.
Kulamada ayaa looga hadlay xaalada Puntland iyo tan guud ee Soomaaliya gaar ahaan arrimaha amniga, dhaqaalaha, mashaariicda iyo doorashooyinka dalka ku soo fool leh, sida ay ilo-wareedyo dowladda katirsan ay u sheegeen bog wareedka Puntland Mirror.
January 31, 2019 Madaxweynaha Puntland oo qaabilay qaar katirsan danjirayaasha ajnabiga ah ee ku sugan Soomaaliya
Garoowe-(Puntland Mirror) Banaanbaxyo looga soo horjeedo maamulka Somaliland ayaa maanta oo Axad ah ka dhacay meelo ku yaala gobolada Sanaag iyo Hayland ee Puntland. Meelaha ay banaanbaxyadu ka dhaceen ayaa waxaa kamid ah magaalooyinka, Badhan, [...]